DAAWO VIDEO DEG DEG Goorta Safarka Hargeysa Ku tagayan MW Farmajo Iyo RW Abey,XOG LA HELAY - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO DEG DEG Goorta Safarka Hargeysa Ku tagayan MW Farmajo Iyo RW Abey,XOG LA HELAY
DAAWO VIDEO DEG DEG Goorta Safarka Hargeysa Ku tagayan MW Farmajo Iyo RW Abey,XOG LA HELAY
February 17, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Somaliland, Wararka Maanta 2
Ilo Xog Ogaal Ah Ayaa Xaqiijinaya In Safarka Wada Jirka ee Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed cabdulahi Farmaajo Iyo raysal wasaaraha Dalka Itoobiya Abey Axmed Ku tagayaan Hargeysa Dhaci Doono,Marka uu safarka Kaga Soo laabto Abey Imaraadka Carabta iyo Khaliijka.
Sidoo kale Waxaa Lagu wadaa inuu Shir jaraa’id qabto Muuse Biixi Cabdi uu uga Hadlayo waxaa Ay kaga wada Hadleen Madaxweyne Farmajao Iyo Sidoo kale Safarka Hargeysa.
DAAWO:- Jabhadda SSC oo dhaqdhaqaaq cusub kabilawday Buuhodle + Boqolaal kamid ah Jabhadaasi oo maanta gaadhay…
DEG DEG:Hargeysa oo Calanka Somalia ka babanayo, Ciidamo goostay meelo badan & Muuse Biixi oo wasiiradiisa ku amray inay Farmaajo….
Bulsho kasta waa laga dhex helaa qaar xagjir ah oo qaddiyad aalaa ba bulshaweynta iyo aadmiga kale ka dhaqan duwan aad u cabsan oo si xun ugu mintidan. Sidaas aawadeed baa Isaaqa looga dhex arkaa in kooban oo qaddiyaddii SNM ee dhicisowday weli u dhimanaya oo adduunyada ka dhega adeegay. Dhibta kuwan ku geedaaman baa ah in qaddiyaddoodu ay aad uga baxsantahay diinta Islaamka, dhaqankeena suubban iyo xadaaradda wanaagsan ee aadmiga qumman.
In uu Farmaajo Hargeysa booqdo Soomaalida qumman iyo Beesha Caalamka ba wax iska caadi ah ayay la tahay xaqiiqdii waayo mar waa nafar Soomaaliyeed oo magaalo Soomaaliyeed booqday, marka kale na waa madaxweyne booqday qayb dalka uu masuulka ka yahay ka mid ah iyo caasimaddiisii labaad. Kuwa qabyaaladda iyo cunsuriyadda la xanuunsan uun bay la tahay in uu buunkii Qiyaame ka dul yeedhay.
Soomaali uu Eebbe saxarkii ka saaray oo dib u samaatay waa farxaddeena.
Marka uu Farmaajo Hargeysa ka caga taagto ayay soo if bixi doontaa xaqiiqada dhabta ee ah in ay shacabkaasu yihiin kuwo si xun loo cabbudhinayay oo uu dhakada kaga taagnaa maamul jabhadeed aan arxan lahayn. Markaas bay caddaan doontaa sida ay shacabkaasu ugu heellanaayeen oo una hiloobeen qarannimadooda Soomaaliyeed iyo dalkooda Soomaaliya ee qori caaraddii looga faquuqay.